Soo -noqoshada warshadaha: IMEX America waxay dib u soo celisaa ganacsiga, barashada & xiriirada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Soo -noqoshada warshadaha: IMEX America waxay dib u soo celisaa ganacsiga, barashada & xiriirada
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Wararka Mareykanka
Waxa lagu soo dallacay “soo-noqoshada” warshadaha dhacdooyinka ganacsiga adduunka, IMEX America waxay ka dhici doontaa November 9-11 Las Vegas. Daabacaadii 10aad ee bandhiggu wuxuu leeyahay guri cusub, Mandalay Bay, waxaana lagu wadaa inuu bixiyo fursado ganacsi, barnaamij waxbarasho oo dhiirrigelin leh iyo dhacdooyin bulsheed oo xasaasi ah, dhammaantoodna ku sugan jawi ammaan ah laakiin aan madhalays ahayn.
Iibsadayaashu waxay la kulmi karaan alaab -qeybiyeyaasha ku baahsan dhammaan qaybaha warshadaha munaasabadda.
Meelaha ilaa hadda ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Australia, Korea, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland, iyo Panama.
Kooxaha huteelka ilaa maanta waxaa matalaya Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group, iyo Associated Luxury Hotels International.
Bandhigga hiigsiga wuxuu leeyahay, sida had iyo jeer, ganacsi udub dhexaad u ah iyo iibsadayaashu waxay la kulmi karaan alaab -qeybiyeyaasha oo ku fidsan dhammaan qaybaha warshadaha. Kuwaas waxaa ka mid ah meelaha loo safro Australia, Kuuriya, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland iyo Panama iyo sidoo kale kooxaha hoteelka Radisson, Group Hotel Wyndham, Mandarin Oriental Hotel Group iyo Associated Luxury Hotels International. Argentina, Canada, Puerto Rico, Detroit, Memphis, Baltimore iyo Loews Hotels ayaa ka mid ah kuwa soo bandhigaya oo ballaariyay joogitaankooda bandhigga.
Kala duwanaanta, qoob -ka -ciyaarka & waxbarashada qaybta gaarka ah
Dhiirrigelinta, barnaamijka barashada bilaashka ah ee ka socda bandhigga oo dhan waa inaan la seegin, oo wuxuu bilaabmaa Isniinta Smart, oo ay ku shaqayso MPI, wuxuu dhacayaa 8 Noofembar, maalinta ka horreysa IMEX America. Dr Shimi Kang oo ka socda Jaamacadda British Columbia ayaa bixin doonta furaha Isniinta Smart, oo soo bandhigi doonta hababkii ugu dambeeyay ee cilmi-baarista ku salaysnaa la-qabsiga, hal-abuurka, iskaashiga iyo guusha ganacsi ee waarta.
Kalfadhiyo go'an oo loogu talagalay kooxaha warshadaha kala duwan ayaa u oggolaanaya ka -qaybgalayaashu inay shaqsiyeeyaan waayo -aragnimadooda Smart Isniinta. Waxaa jira waxbarasho iyo isku-xirnaan gaar ah oo u leh maamulayaasha shirkadaha Madasha Kulanka Fulinta-oo loogu talagalay madaxda sare ee shirkadaha Fortune 2000-iyo Focus Focus Corporate-oo u furan dhammaan qorsheeyayaasha shirkadaha heerarka kala duwan. Ka-qaybgalayaashu waxay filan karaan wada-hadal qoto-dheer oo ku saabsan mowduucyada sida naqshadaynta kulanka, xiriir wax-ku-ool ah oo lala yeesho shaqaalaha kooxda fog, iyo caafimaadka maskaxda iyo fayoobaanta.
Carina Bauer iyo Ray Bloom
Hoggaamiyeyaasha ururku waxay isku xiri karaan oo wax la baran karaan asxaabtooda Madasha Hoggaanka Ururka, oo ay abuurtay ASAE. Qaab aqoon -isweydaarsi cusub oo loogu talagalay 2021, Madashu waxay si toos ah u eegaysaa jawiga ganacsi ee is -beddelay oo ay hadda ururadu ku shaqeeyaan. Madashu waxay sahamin doontaa sida wax looga qaban karo isbeddelada aasaasiga ah ee ay soo dedejisay masiibada, kuwaas oo ah filashooyinka xubinta sare, kordhinta kala duwanaanshaha xubnaha, qiyamka jiilka oo kala duwan iyo dardargelinta horumarka teknolojiyadda.
Marna ma jirin waqti ka wanaagsan oo lagu tartamo kala duwanaanshaha warshadaha dhacdooyinka meheradda waxayna She Means Business sameysaa intaas. Dhacdada wadajirka ah ee IMEX iyo majaladda TW, oo ay taageerto MPI, waxay isu keentaa guddi hoggaamiyeyaal haween ah oo ka socda gudaha iyo dibaddaba si ay ula wadaagaan sheekooyinkooda iyo talooyinkooda. Hamiga, ficilka iyo la xisaabtanka: Dejinta yoolka Istiraatiijiga ah ee haweenka dhacdooyinka waa kalfadhi wax ku ool ah oo leh talooyin ku saabsan sida loo gaaro "aragti weyn," oo ay dhiibtay Juliet Tripp, Ku -xigeenka Madaxa Dhacdooyinka Caalamka, Daawashada Kiimikada. Michelle Mason, Madaxweynaha iyo Maamulaha Guud, ASAE iyo lataliyaha Courtney Stanley, Courtney Stanley Consulting waxay casuumayaan laba nin si ay ugu biiraan wadahadalka kala duwanaanshaha Kala duwanaanshaha iyo Sinnaanta Jinsiga - Dumarku waxay Raadiyaan Wadahadalada Ragga.
Maalin kasta waxay ku bilaabataa qodobka MPI. Dhaqdhaqaaqayaasha iyo ruxruxyada ka baxsan warshadaha dhacdooyinka meheraddu waxay mid walba u soo bandhigi doonaan aragtidooda adduunka ee u gaarka ah-filayaan dhakhtar ku guuleystay Harvard oo abaal-mariyay, mid ka mid ah "qorayaasha ugu jecel adduunka" oo lagu daray aasaasaha dhaqdhaqaaqa qoob-ka-ciyaarka adduunka iyo beesha.
The Inspiration Hub ayaa mar kale guriga joogta si ay u muujiso waxbarashada sagxadda, iyadoo bixineysa jadwalka jadwalka ah ee fursado waxbarasho oo wax ka qabta baahiyaha ganacsi dhammaadka 2021. Kalfadhiyadu waxay daboolaan Hal -abuurka xagga isgaarsiinta; Kala duwanaanshaha iyo helitaanka; Hal -abuurka iyo farsamada; Dib u soo kabashada meheradda, Wada xaajoodyada Heshiiska, Astaanta Shaqsiyeed, iyo Waaritaanka.
Dhacdooyinka bulshadu waxay keenaan jahawareer iyo yaab
In kasta oo bandhiggu uu yahay udub dhexaadka ganacsiga iyo barashada, sidoo kale waxaa jira fursado badan oo lagu xiri karo bannaanka bandhigga. Socdaalka Cuntada Dib-u-Dhimashada wuxuu bixiyaa hoos-u-dhaca Las Vegas oo ay weheliyaan qaar ka mid ah cuntada ugu fiican Strip. Safarrada kale waxay bixiyaan jidka gudaha laba goobood oo astaan ​​ah: Qasriga Caesar iyo Mandalay Bay.
Safarka Qarsoon waa fiid yaab leh oo waayo -aragnimo u gaar ah, goobo qabow, cunto cajiib ah iyo shirkad weyn. “Waa arrin aan la garanayn meel loo socdo. Dadka waxaa lagu hayaa mugdiga ilaa daqiiqada ugu dambeysa - waana halkaas meesha sixirku ka dhaco! ” ayuu sharxayaa Sarkaalka Sarkaalka Dahsoon Dave Green. Waxaa kale oo jira fursad lagu dabaaldego dhacdooyinka warshadaha soojiidashada leh SITE Nite North America iyo MPI Foundation Rendezvous.
“Ma sugi karno inaan aragno soo noqoshada IMEX America oo aan isu keenno bulshadeena dhacdooyinka ganacsiga. Qaar badan oo ka mid ah warshadaha, bandhiggu wuxuu qayb muhiim ah ka qaataa soo kabashada meheraddooda wuxuuna u taagan yahay fursad gaar ah oo uu kula kulmo asxaabtiisa iyo la -hawlgalayaasheeda oo aysan arag ku dhawaad ​​laba sano, ”ayay sharraxday Carina Bauer, oo ah Maamulaha Kooxda IMEX.
“Waxaan si taxaddar leh u diyaarinnay bandhig ganacsi ku leh wadnaheeda iyo sidoo kale inaan hubinno inaan suuqa u soo bandhigno waayo -aragnimo dhacdo oo ku habboon waqtiyada; dhamaanteen waan ka shaqayneynaa Gacanka Mandalay. "
IMEX America waxay ka dhacdaa 9 - 11 Noofambar Mandalay Bay ee Las Vegas iyadoo leh Smart Isniinta, oo ay ku shaqeyneyso MPI, 8da Noofembar. Si aad isu diiwaangeliso - bilaash - guji halkan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha hoyga iyo si aad u ballansato, guji halkan.
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan showga, guji halkan. Dhageyso Guddoomiyaha IMEX, Ray Bloom iyo Maamulaha, Carina Bauer, waxay ka hadlaan qorshayaasha IMEX America, dalabka suuqa ee la-dul-taagay, soo-bandhigaha iyo heerarka dulsaarka iibsadaha ee ugu dambeeyay Wadahadalka Carina.